Ny mpikambana - Ny Teny Foundation • Ho lasa mpikambana
Maro no tonga mpikambana ao amin'ny The Word Foundation noho ny fitiavany ireo boky Percival, ny herim-pomba lalina teo amin'ny fiainan'izy ireo sy ny faniriany hanohana antsika amin'ny fahazoana mpamaky lehibe kokoa. Tsy toy ny fikambanana hafa, tsy manana mpitsabo, mpampianatra na tompon'andraikitra miahy. Ny tanjontsika sy ny fanoloran-tenantsika dia ny hampahafantatra amin'ny olona ny sangan'asam-peon-tsarimihetsika Percival, Fisainana sy faniriana, ary koa ireo boky hafa. Afaka mahazo tari-dalana isika, raha angatahana, fa isika koa dia mpanohana ny fahendren'ny governemanta -na mianatra matoky sy mandray ny fahefana anatiny. Ireo boky Percival dia afaka manampy amin'ny alalan'ity dingana ity.
Ny mpikambana rehetra ao amin'ny The Word Foundation, na inona na inona ny fanohanana azonao fidiranao, dia hahazo ny gazetinay isam-bolana, The Teny (Sample Magazine), ary ny fihenam-bidy 40% amin'ny boky Percival.
Ny Word Foundation dia manohana ny fianarana ny boky Percival. Amin'ny alàlan'ny gazetibonay, The Word, dia namorona toerana iray isika hampahafantarana ny mpamaky ny karazana fianarana samihafa. Raha misy mpikambana iray ao amin'ny The Word Foundation, dia azo jerena ao amin'ny gazetintsika ity vaovao ity:
• Lisitry ny mpikambana izay liana amin'ny fianarana amin'ny hafa.
• Fanampiana avy amin'ny Word Foundation ho an'ireo izay Te hanatrika na handamina vondrona fianarana ao amin'ny fiarahamonina misy azy ireo.
Ny fiainana iray eto an-tany dia ampahany amin'ny andian-dahatsoratra, ho fehintsoratra iray ao anaty boky, toy ny dingana iray amin'ny dianao na amin'ny andro iray eo amin'ny fiainana. Ny fisainana vintana sy ny fiainana tokana eto an-tany dia roa amin'ireo fahadisoana miavaka ataon'ny olombelona. HW Percival